Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fangatahana Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana
Raha olom-pirenena amerikana mikasa ny hitsidika an'i India ianao dia mahazo eVisa no fomba tsotra indrindra hanamafisana ny fizotry ny fangatahana visa. E-Visa India (Indian Visa Online) no fomba fiasa tsy misy manahirana sy mitsitsy fotoana ahafahanao manao veloma amin'izay taratasy mifandraika amin'ny visa, filaharana lava na fitsangatsanganana matetika any amin'ny biraon'ny fangatahana visa.
Mba hahatonga ny fizotry ny fangatahana visa ho tsotra sy mora dia azonao atao ny manatanteraka ny fepetra rehetra mifandraika amin'ny visa mankany India avy hatrany amin'ny fampiononana ao an-tranonao. Indian Visa Online Application dia fomba tsotra, tsotra ary mety hahazoana ny eVisa India (Indian Visa Online) nefa tsy mitsidika masoivoho Indiana. Resadresaka hafa momba ny Indian Visa Online (eVisa India) no voarakitra amin'izany Fangatahana Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana..
Fahazoan-dàlana ho an'ny India eVisa Online ho an'ny olom-pirenena amerikana
Indian eVisa (Indian Visa Online) dia navoaka ho an'ny teratany vahiny fotsiny mba hitsidika firenena iray mandritra ny fotoana voafaritra. Raha olom-pirenena amerikana mikasa ny hitsidika an'i India mandritra ny fotoana fohy ianao dia afaka mangataka eVisa any India. Ny fangatahana Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana dia azo fenoina amin'ny Internet. Vakio ny momba ny Indian Visa Online (eVisa India) éligibilité.
Ny tanjonao amin'ny fitsidihanao an'i India dia mety ho tafiditra fa tsy voafetra amin'ny:
manatrika fampianarana / fialan-tsasatra fohy any India,
manatrika fihaonambe / seminera manokana na ho an'ny daholobe any India,
fitsangantsanganana / fitsidihan'ny namana sy havana,
asa an-tsitrapo tsy misy fandoavana vola,
fitsaboana ara-pahasalamana ao anatin'izany ny fitsaboana rehetra eo ambanin'ny rafitra fitsaboana Indiana.
Amin'ny maha olom-pirenena amerikanina anao dia tsy maintsy mameno ny fepetra takiana fototra hafa ianao araka ny voatanisa etsy ambany ao amin'ny Application Visa Indiana:
Pasipaoro manana enim-bolana farafahakeliny amin'ny fotoana fampiharana eVisa,
Tsy maintsy manana tapakila miverina na tapakila dia mandroso rehefa mandeha any India miaraka amin'ny eVisa,
Tsy maintsy manana vola ampy rehefa mitsidika an'i India miaraka amin'ny eVisa,
Tsy maintsy manana pasipaoro manokana na dia zaza tsy ampy taona na ankizy aza.
Raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny fepetra takiana amin'ny fampiharana eVisa India jereo ny antsipirian'ny fahazoan-dàlana ho an'ny olom-pirenena amerikana voalaza amin'ity tranonkala.
Sokajy ho an'ny India eVisa (India Visa Online)
Amin'ny maha-olom-pirenena amerikana anao dia mety te-hitsidika an'i India mandritra ny fotoana voafaritra ianao. Miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihanao avy any Etazonia ianao dia homena visa manokana sokajy. Ny tanjon'ny fitsidihanao any India mandritra ny fotoana fohy dia mety ahitana fizahan-tany, fandraharahana, fihaonambe, fitsaboana, vonjy taitra sns.
Ny eVisa-nao mankany India (Indian Visa Online) dia mety ho anisan'ny sokajy eVisa manaraka ireto:
Visa Indiana e-tourist,
Visa Indiana e-business,
Visa eMedical Indiana ary Visa Indiana e-medical attendant,
Visa e-conference Indiana, Raha mikasa ny hitsidika an'i India ianao amin'ny alàlan'ny eVisa India (India Visa Online) izay ho tafiditra ao anatin'ireo sokajy etsy ambony ireo, dia ataovy azo antoka ny manamarina ny fepetra ilaina amin'ny sokajy tsirairay voatanisa etsy ambony.
Ny sokajy e-visa tsirairay amin'ny fitsidihana an'i India dia tonga miaraka amin'ny fe-potoana voafaritra sy ny fahazoan-dàlana hijanonana any India. Amin'ny maha-olom-pirenena amerikana anao, miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihanao, jereo ny fepetra momba ny sokajy voatonona ao https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html.
Dingana amin'ny fangatahana e visa
Ny fangatahanao eVisa dia dingana mora amin'ny Internet. Ho an'ny fampiharana eVisa India tsidiho ny tranokala ho an'ny Application Visa Indiana izay nihatra mivantana tamin'ny Governemanta India. Ny dingana fampiharana dia dingana efatra tsotra. Mba hanamora ny fizotry ny fangatahanao, tehirizo ho vonona daholo ny antontan-taratasy ilaina.
Amin'ny maha-olom-pirenena amerikana anao raha mangataka fangatahana Visa Indiana (eVisa India) mankany India ianao dia mila,
dika mitovy amin'ny pejin'ny pasipaoronao amin'ny endrika pdf hampidirina ao amin'ny vavahadin-tserasera India Visa Application.
mila kopia scanned amin'ny sarinao amin'ny endrika jpg/jpeg ihany koa ianao.
Raha tsy afaka mampakatra ny sary ianao dia ny contact Birao fanampiana amin'ny fampiharana Visa Indiana.
Amin'ny maha olom-pirenena amerikana anao dia ataovy azo antoka fa efa vonona ny antontan-taratasy rehetra ho an'ny fizotry ny fampiharana eVisa India. Vakio eto momba ny Indian eVisa Online antontan-taratasy takiana
Ny fangatahana e-visa any India dia ahitana ireto dingana manaraka ireto:
Ampiharo amin'ny India Visa Application Online ato amin'ity tranonkala ity
Mandoa vola amin'ny fampiharana eVisa India amin'ny Internet mampiasa ny fomba fandoavam-bola voatanisa ao amin'ny tranokala.
Rehefa avy nandoa mora ny saram-pikarohana eVisa an-tserasera ianao dia hahazo fahazoan-dàlana elektronika / ETA amin'ny mailakao ianao. Ataovy azo antoka ny manamarina ny mailakao voasoratra anarana ho fanamarinana ny fangatahanao eVisa mankany India.
Ho dingana farany amin'ny fangatahanao eVisa ho an'i India dia mila manonta ny antontan-taratasy ETA voaray tamin'ny mailakao ianao. Raiso ny antontan-taratasy ETA vita pirinty eo amin'ny toeram-pisavana fifindra-monina ho an'ny fanomezan-dàlana amin'ny fotoana fitsangatsanganana ary ny eVisa dia hosokajiana amin'ny pasipaoronao.
Ataovy azo antoka ny manamarina ny toeram-pisavan'ny fifindra-monina any India izay ahafahanao mandeha mampiasa eVisa. Ireo toerana fisavana fifindra-monina voatanisa ao amin'ity tranokala ity ihany no manaiky ny fidirana amin'ny alàlan'ny eVisa. Ny eVisa ho an'i India dia tsy azo ampiharina afa-tsy amin'ireo toby fisavana fifindra-monina voatanisa ao India ireo.
eVisa India (India Visa Online) ho an'ny olom-pirenena amerikana amin'ny 2021
Amin'ny maha-olom-pirenena amerikana anao dia mety te-hitsidika an'i India ianao amin'ny tanjona isan-karazany izay mety ahitana fizahan-tany, fitsidihana ny fianakaviana akaiky na havana na tanjona hafa amin'ny fitsidihana fohy ao amin'ny firenena. Alohan'ny hahatongavana any India dia ataovy azo antoka ny manamarina ny protocols Coronavirus farany navoakan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fiahiana ny fianakaviana, Governemanta India.
Raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany dia tsy maintsy mandalo ny manaraka ny antontan-taratasin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny fiahiana ny fianakaviana, GOI. Ny 20 oktobra ny filazanath,2021 dia ahitana ny torolàlana farany ho an'ny mpandeha iraisam-pirenena rehetra. Ny antontan-taratasy dia ahitana ny torolalana rehetra mifandraika amin'ny fahasalamana manomboka amin'ny fanomanana ny dianao mankany India mankany amin'ny fiondranana, mandritra ny dia sy ny torolalana amin'ny fahatongavana ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena tonga amin'ny seranana an-dranomasina / an-tanety.
Alohan'ny hahatongavana any India Ataovy azo antoka ny manamarina izay fampandrenesana nohavaozina ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena momba izany tranonkala.
Hafiriana no hahazoanao ny India eVisa (Indian Visa Online)?
India eVisa no fomba mora indrindra handehanana any India mandritra ny fotoana fohy. Miankina amin'ny sokajin'ny eVisa-nao, mety haharitra 2 ka hatramin'ny 15 andro ny fikarakarana ny fangatahanao eVisa.
Ny eVisa India anao dia azo mifototra amin'ny faharetana rehetra ary misy amin'ny sokajy isan-karazany miaraka amin'ny fandoavana ny vidiny raikitra miampy ny saram-panompoana tafiditra izay miankina amin'ny fe-potoana sy ny tanjon'ny fitsidihanao an'i India.
Ahoana ny fomba hijerena ny sata fampiharana eVisa India anao?
Azonao atao ny manamarina mora foana ny satan'ny fangatahana Visa Indiana anao amin'ny alàlan'ny mailaka voasoratra ao amin'ny taratasy fangatahana eVisa anao. Hampandrenesina mora foana ianao raha nolavina na ekena amin'ny alàlan'ny mailaka ny fangatahanao e-visa ao anatin'ny 72 ora na mihoatra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny eVisa dia azonao atao ny mifandray eVisa mpanampy an'ny Indian Visa Online (eVisa India) ao amin'ny info@evisa-india.org.in
Mifandraisa amin'ny Indian Visa Online (eVisa India) Help Desk raha mila fanazavana fanampiny.